Fluorescent Colors Acrylic Sheet, China Fluorescent Colors Acrylic Sheet Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Jumei Acrylic Kugadzira Co, Ltd.
Imba>chigadzirwa>Ruvara Acylic Sheet>Fluorescent Colors Acrylic Sheet
Fluorescent Colors Acrylic Sheet ine hupfumi hwemavara agility.The runako rwe fluorescent ruvara acrylic sheet inogona kuratidzwa muchiedza chechisikigo. Icho sarudzo yakanaka yezvigadzirwa zvechitoro, poindi-yekutengesa-inoratidzira uye zvimwe zvinoshandiswa zvemukati.
◇ Wepamusoro-giredhi cast acrylic machira akagadzirwa kubva chete 100% mhandara mbishi zvinhu.
◇ Ese maacrylic machira akaputirwa neUV, anovimbisa machira kuti haachinje kana uchishandisa panze, anogona kushandisa kunze kwemakore 8-10.
◇ Hapana hwema kana ucheka ne laser kana CNC muchina, inonamira nyore uye inogadzikana.
Film Inodzivirira firimu inotengeswa kunze, mukobvu uye nyore kubvisa, hapana guruu yakasara.
◇ Yakanakisa ukobvu shiviriro uye kukwana kwakaringana